Heart Museum: *****လမ်းပြကြယ်*****
မမေ့နိူင်တဲ့ အတိတ်စွဲ ဝေဒနာ
သတိရခြင်းတွေနဲ့ ခဏခဏ ဆွမိတယ်။
ငါ့ဘ၀ တခုလုံး အမှောင်ဖုံး
အနာဂတ် ဆိုတာလဲ ပျောက်ဆုံး
တခါတခါ အိမ်မက်တွေနဲ့ သတိရ
တခါတခါ အိပ်မပျော်ခြင်းတွေနဲ့ တမ်းတ
ဘယ်သူ့ အနားမှာ လင်းနေသလဲကွယ်။
် ငါကတော့ .......
***ရွှန်းမှီရဲ့ ဒီကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး အတွေးနယ်ချဲ့ ခံစားမိပါတယ်။***
Posted by Heartmuseum at 3:29 PM
ရောဂါ ပြန်ထနေပြီလား ကောင်ကလေး အခုရက်ပိုင်း ပို့ စ်တင်ကျဲနေတာ ဒါကြောင့်ကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်တူ ခံစားပေးသွားပါတယ်ဗျာ စောင့်စားမှုတွေ အမြန် ဝေးကွာနိူုင်ပါစေလို့။
ခလေးရယ် ( သီချင်းဆိုကြည့်တာ :P )
inn hpyit ya mae Heart Museum. :P Chit tat dar soe tal naw... A sin pyae bar zae :) :)
အိုး ကလေးရယ် ဘာကြောင့်မင်းနဲ့ တွေ့မှငါအသည်းတွေ
ပြတိုက်ဖြစ်ရတာလဲကွယ် ???????? ဟီးဟီး စတာပါဗျာ
ရက်တွေကိုခြစားရင်းနဲ့ ပဲ အဆင်ပြေမှာပါအကိုရေ.....
ဒီကဗျာထဲကကောင်မလေးက အကိုရဲ့ နံရိုးတစ်ချောင်းဆိုရင်တောင် အကိုမှာ နံရိုးများကြီးများကြီးကျန်သေးတယ်နော်.....ဟီဟီ
ဟီး.. ပြန်ပေး .. ပြန်ပေး . .
အစ်ကိုဟတ်ရေ .. ..
ရွှန်းမီ သိတာကတော့ ဒယ်ဒီ အချစ်ဟောင်းကို လွမ်းရင် မာမီက စိတ်ကောက်တယ်.. :-)
.. ဒါနဲ့ . . ဒီအိုင်ဒီယာကတော့ ဦးသွားပြီ ..
အလင်းနှစ် သန်းပေါင်းများစွာ စောင့်စားခဲ့ရတဲ့
ဆိုတာ .. .
တခါတခါ ကြယ်တွေအကြောင်း တွေးကြည့်ရတာ အီလည်လည်ကြီး.. တကယ့်ကြယ်တွေက အခု မြင်နေရတာတွေက မရှိတော့တာ ကြာပြီ တဲ့ ..
ကဗျာလေးက နူးညံ့နေတာပဲ ... ဘယ်သူ့ အနားမှာ လင်းနေသလဲကွယ်။ တဲ့...
အပြစ်တင်သံ မပါဘဲ နူးနူးညံ့ညံ့လွမ်းထားတယ်...
ဟိုတချိန်က လမ်းပြကြယ်ကလေး ကိုပြတိုက်ကြီးအနားမှာ ပြန်လည်လင်းလက်နိုင်ပါစေဗျို့ :) ကိုပြတိုက်ကြီးတို့ကတော့
ဆင့်ပွားခံစားထားပေလို့သာပဲ သ်ိပ်အသက်ဝင်တယ်ဗျ။ ပုံလေးတွေနဲ့လည်း လိုက်ပ :) ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ
ကိုပြတိုက်ကြီး ရေ... ကဗျာ လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ.
(ပြတိုက်ထဲက ကဗျာကောင်းတွေ ထပ်ထပ်ထွက်လာ တုန်းပဲဗျို့..)
လမ်းပြကြယ်လေးနဲ့ ကိုအညတရရှိတဲ့နေရာကို ရောက်လာပြီး အဲဒီမှာပဲ ထာဝရလင်းနေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
star bright star light,
many up in the sky..
hope u find urself another guide!
ဟိုတချိန်က လမ်းပြကြယ်လေးရယ်....း)မင်းပျော်ရာမှာလင်းပါ...ကျေနပ်တယ်ဆိုပါလား ...မှီ့ ကဗျာလေးလည်း ကောင်းတယ် ကိုပြတိုက်ကဗျာလေးလည်း ကြိုက်တယ်ဗျာ...အနာဂတ် တွေ ပျောက်ဆုံးနေရ ခြင်းမှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဗျာ...။
ပျော်ရာမှာလင်းလို့ ဖြစ်မလား။ သူ့နေရာမှာပဲ သူလင်းရမှာပေါ့.. အဲဒီလို လျောက်ရွေ့လင်းလို့ ရကြေးလား။ ပြန်ဖမ်းပြီး ကြိုးနဲ့ ချိတ်ထားအကို. :P
အများတကာတွေလိုတော့ သိပ်မရေးတတ်ဘူး အစ်ကိုရေ ဘယ်နေရာမှာပဲလင်းလင်း အလင်းရဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား။ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
ကျွန်တော်တော့ မိုးပေါ်က ကြယ်တစင်းထက် မြေပေါ်က ပန်းတပွင့်ကို တွယ်တာချင်မိတော့တယ်..
မပြောတတ်တော့ဘူးဗျာ...။ လွမ်းရမှာကို သေရမှာထက်ကြောက်တယ်...။